Fampiharana ny filtran'ny membrane amin'ny vokatra fambolena sy sisiny
Fotoana fandefasana: Aug-06-2021
Amin'ny vokatra fambolena sy sisiny, ny divay, ny vinaingitra ary ny soja dia masirasira amin'ny masomboly, voa. Ny filtration an'ireo vokatra ireo dia dingana famokarana manan-danja, ary ny kalitaon'ny filtration dia misy fiatraikany mivantana amin'ny kalitaon'ny vokatra. Ny fomba filtration nentim-paharazana dia ahitana n ...Hamaky bebe kokoa »
Sivana tanteraka sy sivana mifandraika
Amin'ny fisafidianana ny singa an-trano / sivana sivana, Tsy ampy izany raha ny fiheverana ny isa fanivanana sy ny haben'ny trano sivana ihany, fa mila dinihina koa ny fahombiazan'ny sivana. 1 naoty nominal: taloha, naoty nominal dia nampiasaina mba hamaritana ny marina filtration ny sivana. H ...Hamaky bebe kokoa »
Fampidirana singa sivana manify manify
Ny "filtration" dia manondro ny fisarahan'ny poti kely madinidinika na ny aerosol amin'ny tsiranoka (gazy / ranoka) amin'ny tsiranoka. Ny fitaovana ampiasaina hanatrarana io fisarahana io dia ny fitaovana sivana. Ny fitaovana sivana dia tsy maintsy apetraka miaraka amin'ny singa sivana.Hamaky bebe kokoa »
Inona ny singa mikraoba mikraoba mikraoba
Fotoana fandefasana: Mey-27-2021
Ny toetra mampiavaka ny singa mikraoba mikraoba mivalona dia ny: tahan'ny fandavana avo, ny tahan'ny fikorianana avo, ny fahasamihafana amin'ny tsindry ambany ary ny mifanentana simika malalaka; Ny fizotry ny famokarana dia mandray ny teknolojia fanodinana fantsom-panafanana mafana tsy manam-paharoa, tsy misy fametahana, tsy misy resaka relea ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fampidirana trano sivana vy tsy misy vy
Ny trano dia matetika vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ary ny atiny dia mampiasa PP mitsonika tsofina, tadin'ny tadiny, sivana mivalona, ​​sivana titanium, sivana karbaona mihetsika ary singa sivana fantsona hafa ho singa sivana. Ireo singa sivana samihafa dia voafantina arakaraka ny differe ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fomba hamokarana cartridge sivana pleated?
Fotoana fandefasana: Mar-06-2021
1. Sivana taratasy fanivanana hamokarana plastika misy sivana. Mametraka haino aman-jery sivana voasedra kalitao miaraka amin'ny sakany mety amin'ny roller, ny milina fitalahoana dia manomboka manamboatra takelaka sasany ho toy ny fitsapana mihazakazaka manitsy ny hafainganam-pandeha sy ny haavon'ny pleating. Ny firafitra mahafinaritra dia nampitombo ny fi ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: Feb-16-2021
Ny filtration Kinda dia nanangana laboratoara lehibe, izay afaka manolotra serivisy fitsapana sy fanamarinana feno ho an'ny fanafody, sakafo sy zava-pisotro ary indostrian'ny trano sivana, ary koa ny vahaolana sy ny sivana marina izay manome ...Hamaky bebe kokoa »